Cloudimage.io: UkuGcina, ukuNqunyulwa, ukuHlaziywa, okanye iMifanekiso emiDala njengeNkonzo | Martech Zone
Kutshanje, bendisebenza kancinci kule ndawo ukufumana isantya. Ndisusile itoni yamacandelo ahambayo ukwenza lula indlela yokwenza imali kunye nokudityaniswa, kodwa isantya sesiza sisezantsi kakhulu. Ndiqinisekile ukuba ichaphazela ukufundwa kwam kunye neyam uphando lwezinto eziphilayo ukufikelela. Emva kokucela uncedo kumhlobo wam, uAdam Small, osebenza ngombane ngokukhawuleza iqonga lokuthengisa izindlu nomhlaba, Into yokuqala awayikhombisayo kukuba bendinemifanekiso emikhulu kakhulu elayishayo kwibar yam esecaleni ye-podcast.
Oku bekuphazamisa ukusukela ukuba imifanekiso ivela kwindawo yomntu wesithathu endinolawulo oluncinci kuyo. Ngokufanelekileyo, ndingathanda ukuba ndibanqumle kwaye ndibabambe apha ekhaya, kodwa ke kuya kufuneka ndibhale indibaniselwano entsonkothileyo. Ungayichazanga eyokuba, nangokudityaniswa okuqinileyo, ixesha elinokuthatha ukukhuphela kunye nokwenza ubungakanani kwakhona kwimifanekiso iya kuba mbi. Ke, emva kokhangelo oluthile kwi-intanethi, ndiyifumene inkonzo egqibeleleyo- Ngqngangono.io
Kumthwalo wokuqala womfanekiso, i-Cloudimage ikhuphela umfanekiso wakho wemvelaphi kwiseva yakho / ibhakethi le-S3, kwaye bayilondoloze kwiziseko zophuhliso.
ICloudimage.io inokukhetha ukukhulisa ubungakanani kwakhona, isityalo, isakhelo, i-watermark, kunye nokucofa umfanekiso ukuze uwenze uphendule kwaye ugcine ixesha.
Imifanekiso yakho ihanjiswa kubathengi bakho kwisantya sokukhanya ngeeCDN ezikhawulezayo, kukhokelela kuguquko olungcono kunye nokuthengisa ngakumbi.
Kumiliselo lwam, bendinokutya kwepodcast apho ndifuna ukubonisa imifanekiso yeepodcast kwi-100px nge-100px kodwa, rhoqo, imifanekiso yoqobo yayinkulu (kubukhulu kunye nefayile). Ke- nge-Cloudimage, siyakwazi ukufaka i-URL yemifanekiso kwi-Cloudimage API, kwaye umfanekiso wenziwe ubungakanani kwakhona kwaye wagcinwa ngokugqibeleleyo.
https://ce8db294c.cloudimg.io/isivuno100x100 / x /https://images.fireside.fm/podcasts/images/c/c5d9b182-9c16-43a8-873d-ccc51c40dd8b/episodes/b/b638ca26-7bd9-4f6a-b039-99792720ff4a/cover.jpg
Qaphela i-URL epheleleyo:
Idomain yethokheni kwiCloudImage
Umyalelo wokutyala umfanekiso
Imilinganiselo ebekwe kwi-100px nge-100px
Indlela yam yoqobo yefayile
Ndikwazile ukuvala ii-URL zam apho ndingasebenzisa khona i-API ye-Cloudimage ukuze abanye bangazibi. Kwimizuzu nje embalwa, isisombululo sele silungile, kwaye ngaphakathi kweyure bendisifakile isisombululo Ukondla iPodcast Iwijethi.
tags: ibhakethiumfanekisoUkunyanzeliswaisityaloisakheloukugcinwa komfanekisouxinzelelo lomfanekisoukusika umfanekisoubungakanani bomfanekisowatermark yomfanekisos3uphawuwatermarkwatermark